Afar Kooxood Oo Xalay U Soo Baxay Wareega 16 Ee Champions League – Heemaal News Network
Afar Kooxood Oo Xalay U Soo Baxay Wareega 16 Ee Champions League
Sideed kulan ayaa la ciyaaray xalay wareega group-yada Champions League iyadoo la iska dhaliyay 26 gool taasoo muujineysa in kulamadii xalay la ciyaaray ay ahaayeen kuwa xiiso badan oo shabaqa la iska soo taabtay in badan.
Afar kooxood ayaa xalay xaqiijistay u soo bixitaankooda wareega 16ka Champions League halka group-yada kale uu xiiso sii yeeshay tartanka kooxaha.
Chelsea iyo Sevilla oo kuwa jira Group E ayaa xalay noqday kooxihii ugu horeeyay ee u soo gudba wareega 16ka Champions League ka dib markii ay Sevilla 2-1 kaga badisay kooxda Ruushka ee Krasnador halka Chelsea ay 2-1 kaga badisay kooxda Faransiiska ee Rennes.
Group F ma jirto koox xalay soo baxday laakiin Zenit ayaa xaqiijisatay inay hartay markii ay guuldarro 3-1 kala kulmeen kooxda Lazio halka Borussia Dortmund oo 9 dhibcood ku hogaamineysa group-ka ay 3-0 kaga badisay Club Brugge oo afar dhibcood leh kuna jirta kaalinta 3aad iyadoo Lazio ay 8 dhibcood leedahay.
Israsaaseyn Caawa ka Dhacday Magaalada Muqdisho.
Haweenay Markii Ugu Horaysay Taariikhda Garsoore Ka Noqonaysa Champions League
Heemaal December 1, 2020